ဒါကတကယ့်ဘဝလား၊ HIVE ကို VIRTUAL TRASH အင်္ဂါနေ့များစတင်နေကြသည် - သတင်း
ဒါကတကယ့်ဘဝလား၊ Hive ကို virtual Trash အင်္ဂါနေ့များစတင်နေကြသည်
အုံသည် Edinburgh clubbing မြင်ကွင်း၏ Marmite ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအန်ချင်ခြင်း (သို့မဟုတ် bouncers ပြောသည့်အတိုင်း) သည်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ဓာတ်နှင့်တူသည် ) စိမ်းလန်းသောနံရံများ၏ချောင်း (ဆယ်ကျော်သက်) နှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်စေးကပ်ခြင်းနှင့်ချောခြင်းကဲ့သို့သောစီမံခန့်ခွဲမှုပြုသည့်ကြမ်းပြင်တို့သည်ယင်း၏လည်ချောင်းနာခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်မလွှဲမရှောင်အဲဒီမှာတက်အဆုံးသတ်သည့်အခါဒါပေမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်အသက်အရွယ်၌ရှိခဲ့ဖူးတဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးရပါလိမ့်မယ် - နှင့် Edinburgh ရှိအခြားကလပ်များထက်အများကြီးအများကြီးလျော့နည်းပိုက်ဆံ။
အမှိုက်အင်္ဂါနေ့များသည် ပို၍ ကွဲပြားစေပါသည်။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်လျှင် Hive သည်၎င်း၏ဂန္ထဝင်ဒိန်ခဲနှင့်သတ္တုနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသားများအတွက်ဇယားများကိုလဲလှယ်သည်။ ၎င်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအစွန်းရောက်မှုရှိပြီးသင်၏ရက်သတ္တပတ်၏အတောင့်တင်းဆုံးညဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကတိပြုသည်။
မင်းတို့အားလုံးကိုတစ်ဖက်ခြမ်းမှာတွေ့နိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်အထိအိမ်မှာပဲနေပါ။ #staysafe #stayathomeCredit: Grant Stott နှင့် Tom Duffin Photographer
ကတင် အုံမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 22 2020ပြီ 2020
နှင့်အညီ, သင်ရဲ့လက်လွတ်, ရိုးသားဖြစ်ကုန်အံ့။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းပြီးသားဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသင့်ရဲ့ uni အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူပြီးသည်နှင့်သင်သွေးထွက်သံယိုစောင့်ဆိုင်းလို့မရဘူးတစ်ချိန်က Hive ကိုသွားအစီအစဉ်များကိုလုပ်ပြီးပြီ။ သငျသညျရက်သတ္တပတ်၏မည်သည့်နေ့ရက်ကာလကိုအိမ်မှာထိုင်လျက်ရှိသည်တစ် ဦး skittlebomb တံပိုးလည်ဆွဲပြီးနောက် Indie အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာချယ်လ်ဆီး Dagger မှန်းကျင် Bopping ။
ဒါ့အပြင် Hive ရဲ့မှော်အတတ်ကိုမင်းရဲ့နေအိမ်မှာသက်တောင့်သက်သာရှိစေဖို့ငါပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်။ သငျသညျမဆိုကြာကြာတစ် ဦး Mardy Bum ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Hive ကို virtual Trash အင်္ဂါနေ့များစတင်နေကြသည် ! အကြောင်းကို (Mr) Brightside အပေါ်ကြည့်ရှုရန်တစ်ခုခု!
အမှိုက်ပုံးထဲအင်္ဂါနေ့ပျောက်ဆုံးနေပြီး Rock, Alt & Pop-Punk ပြင်ဆင်ချက်လိုအပ်ပါသလား Old Hive clubnight မှလှောင်ပြောင်သရော်မှုများသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးအားလုံး၏ Live DJ အစီအစဉ်ကိုလွှင့်ထုတ်နေသည်! www.twitch.tv/anticsrocks
ကတင် အုံမှ အပေါ် အင်္ဂါနေ့, 14 2020ပြီ 2020
အင်္ဂါနေ့တိုင်း၊ Hive သည် ယနေ့မှစ၍ ည ၉ နာရီမှနံနက် ၁ နာရီအထိ Trash အင်္ဂါနေ့ DJ အစီအစဉ်များကို livestreaming ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ chat box လုပ်ဆောင်ချက်လည်းရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် Stacy ရဲ့အမေဆီကိုအဓိကအခန်းထဲမှာ mosh လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာသူတို့သောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းကိုတစ်ယောက်ယောက်ကအော်ပြောနေတာကိုပြန်လုပ်နိုင်တယ်။ ချမ်းသာ။
သူတို့သည် Cookie ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ Hi-Society ကြာသပတေးနှင့် Flip Fridays တို့ကဲ့သို့သောအခြားပုံမှန်အစည်းအဝေးများဖြစ်သောအချို့သောညများ၌လည်းတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်နေကြသည်။
သောကြာနေ့ဖွင့်! .. Flip သော့လား 🧐
ကတင် အုံမှ အပေါ် သောကြာနေ့၊ Aprilပြီလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀
ဖြစ်ရပ်များသည် Antics နှင့် ပူးပေါင်း၍ ၀ င်ငွေပမာဏနှင့်ညီမျှသည်ထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို NHS သို့ပေးမည့်အလှူငွေများကိုလက်ခံသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောပထမဆုံး Hive ညအားစက်တင်ဘာလကုန်ချိန်တွင် Wake (you) သို့သင်၏သူငယ်ချင်းများကိုတောင်းရန်မလိုတော့ပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်များ၌သင်၏စီးကရက်နှင့်အရက်ကိုသီးခြားစီစားပါ၊ သင်၏အသံထိပ်ရှိ Wonderwall ကိုအော်ပါ။ သင်၏အိမ်နီးချင်းများ၏စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဒေါက်တာအဲလက်စ်၏ GIRLFRIEND အသစ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်: အိုလံပစ်နှင်းလျောစီးသူ Aimee Fuller
အဆိုပါဖိုရမ်အတွက်ဖက်ရှင်: Ladies '' Edition ကို
တစ် twat ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဘယ်လို
အချို့လူများကဒီ gif ကိုကြည့်သည့်အခါဆူညံသံကိုကြားရပြီးလူတိုင်းကဒီအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်နေသည်
စကော့တလန်တွင်အဖြစ်ဆိုးအများဆုံး uni - စိန့်အင်ဒရူးကိုအမှန်တကယ်သိရှိရန်အချိန်တန်ပြီ